HIVE-MYANMAR community created list
THE ONLY ORIGINAL CONTENT CREATORS FROM MYANMAR
- Only original content with author name are allowed
- Only original creations are allowed (photos, art, picture, songs etc…)
- No crediting post and 18+ writing or photos are allowed
- No political and religious accusing contents are allowed
- No news from Facebook or printed media are allowed
- We are allowed the translation post but must indicate the link or source
- Referral searching post, any kind of spam and abuse post are not allowed
Better late than neverBetter late than never. ဘယ်​တော့မှ မလုပ်တာထက် ​နောက်ကျပြီး လုပ်တာက ​တော်​သေးတယ် It is better to start doing what one has to late than not at all. လုပ်စရာ ရှိသည်ကို ဘယ်​တော့မှ မလုပ်ခြင်းထက် ​နောက်ကျပြီးမှ
ဖြတ်လေးဖြတ်"ဖြတ်လေးဖြတ်" (ကလေးကစားစရာ အရုပ်သေနပ်ပါနော် အထင်မကြီးကြနဲ့အုန်း) ကျနော်ဒီခေါင်းစဉ်ကို မပေးချင်သော်လည်း အောင့်ကာပေးရတော့မည်။ တတိုင်းပြည်လုံး နေရာအစုံမှာ ဒုက္ခပေါင်းစုံခံစားနေကြရသည်။ ယခုလည်း
ပြည်သူ့အောင်ပွဲ (၆)ဒီအခြေအနေမှာ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရတယ် ဆိုတဲ လူတွေ ဘယ်နှယ့် ရှိစ ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်ရမှာ ဒီအချိန် တခု ရှိတယ် တော်လှန်ရေး အောင်ပွဲပဲ နိုင်ရာဝန်ထမ်းပါ အချင်းချင်း ဂရုစိုက်ပါ ဖေးမကူညီပါ အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲ
China Bans Cryptoတရုပ်အစိုးရ၏ ပြည်သူ့ဘဏ်မှ Bitcoin အပါအဝင် Cryptocurrency များ ရောင်းဝယ်ခြင်း နှင့် မိုင်းတူးခြင်း (trading and mining ) အား တရားမဝင်ကြောင်းနှင့် တင်းကြပ်သော စောင့်ကြည့်မှုများ၊ ပြင်းထန်သောအပြစ်ပေးမှုများ
မီးပျက်ခြင်းနှင့် STEM tokenလဲလှယ်ခြင်း...!Hive platform ပေါ်ရှိ ညီအစ်ကို မောင်နှမများအားလုံး မဂ်လာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ... ဒီနေ့တော့ မီးက တစ်နေကုန်ပျက်နေပြီး ဖုန်းအားမရှိတော့သဖြင့် မရေးတော့ဘူး စဥ်းစားနေတာ မနေနိုင်၍ အတိုလေးတစ်ပုဒ်တေါ့
မိုးရာသီ မြင်ကွင်းမနက်ခင်း အိပ်ယာထ ငှက်ကြေးသံ တီတီ တူတူ ကျလိကျလိ နှင့် ရှဉ်တို့၏ တဂီးဂီး အော်သံများဖြင့် နိူးထခဲ့သည်။ ခြံအတွင်း ရေဝင်နေမှုက အနည်းငယ် ကျဆင်းသွားသည်။ ကျွန်တော့်တို့ခြံဝင်းက မြေနိမ့်ပိုင်းမှာရှိသည်။ ကားလမ်းကတ္တရာ
Paper Box & Frame,How to do it Easily
ပြည်သူ့အောင်ပွဲ (၅)အောင်မြင်စေကြောင်း ဆုချွေတောင်း ဘေးရန်ကင်းဖို့ မေတ္တာပို့ ဆုချွေတောင်း သွေးချင်းတို့ရေ အရေးကြီးပြီ သွေးနီးကြစို့ အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲ ငါတို့တိုက်မယ် အောင်ပွဲ မဝေးတော့ပြီ #CivilDisobedienceMovement